Waraaqado digniin ah oo lagu daadiyay degmada Afgooye ee gobalka Sh/hoose.
on August 31 2013 Wararka naga soo gaaraya degmada Afgooye ee gobalka Sh/hoose ayaa waxay sheegayaan in halkaasi lagu daadiyay waraaqado digniin ah oo qalqal geliyay dhamaan dadka ku nool degmadaas.
Waraaqahaas ayaa sida la sheegay waxaa ku qoran digniin culus oo ku socoto dhamaan ganacsatada halkaasi ku sugan, taas oo looga digaayo inay wax ka iibiyaan ama xiriir ganacsi ah oo dhaw la yeeshaan ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan degmadaas.
Waxaa sidoo kale waraaqahaasi ku qornaa hanjabaadyo ah in cidii ka dhega adeegta awaamiirtaas ay la kulmi doonto ciqaab aad u xoogan, iyadoona arintaan ay dadka deegaanka ku tilmaameen mid lagu qalqal gelinaayo ganacsatada halkaas.
Dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in waraaqahaan loo maleeynaayo inay ka dambeeyaan Xarakada Al-shabaab, kuwaas oo inta badan hanjabaadyo iyo dillal u geeysta cidii ay ku ag arkaan ama wax ka iibineeysa xubnaha ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, waraaqahaan digniinta ah ee lagu daadiyay degmada Afgooye ee gobalka Sh/hoose ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli saacadihii ugu dambeeyay degmadaasi ay ka dhaceen dilal qorsheeysan, islamarkaana ay ciidamada dowladda Soomaaliya halkaasi ka sameeyeen howlgalo balaaran oo lagu soo qabqabtay dad badan.